Nuxurka War-murtiyeed 8 Qodob ka kooban oo ka soo baxay Gunaanadka Shirka Beelaha Garxajis | Somaliland Post
Home News Nuxurka War-murtiyeed 8 Qodob ka kooban oo ka soo baxay Gunaanadka Shirka...
Nuxurka War-murtiyeed 8 Qodob ka kooban oo ka soo baxay Gunaanadka Shirka Beelaha Garxajis
Gacanlibaax (SLpost)-.Shir weynihii Beesha Garxajis ee Tol-wanaaje laba oo muddoo sagaal caano maal ah ka soconayey Buurta Gacanlibaax, ayaa si rasmi ah loo soo gunaanaday, iyadoo laga soo saaaray war-murtiyeedka hoos ku xusan:
War-muriyeedka Kasoo Baxay Shir weynaha Beesha Garxajis.
Shirweynaha Beelaha Garxajis ee Tolwanaaje 2, ee ku soo xidhmay Buurta Gacan Libaax wuxuu caddaynayaa in si buuxda Shirweynaha la isula qaatay midnimo buuxda oo Garxajis.
Beelweynta Garxajis, waxay caddaymo buuxa u haysaa in Madaxda sare ee Dawladda iyo dhammaan qaab-dhismeedka Dawladda ee Madaxweynuhu soo dhisay, markii la doortay sida Golaha Wasiirrada, Agaasimayaasha guud, Agaasimo waaxeedyada, Madaxda Hay’adaha Madaxa bannaan, hogaamada ciidamada kala duwan, saraakiisha Ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha Dawladda Boqolkiiba shan iyo lixdan (65%) ay ka soo jeedaan ama ka tirsan yihiin beelaha isu bahaystay xaq-darrada. taas oo ah xaalad aan u cuntami Karin Beelweynta Garxajis iyo beelaha kale ee reer Somaliland midna, sidaa awgeed waxaanu soo jeedinaynaa in si deg-deg ah oo daahis lahayn loo saxo loona baddelo caddaalad-darradaas oo ah mid aanay Somaliland ku sii jiri Karin.
3.Beelweynta Garxajis, waxay ku heshiisay inay talo kula noqoto dhammaan beelaha Somaliland, si loo gaadho ama loo helo Somaliland la wada leeyahay.
Beelweynta Garxajis waxa u caddaatay in khayraadkii dalka, maalgashigii dibadda, kaalmooyinkii caalamiga ahaa iyo dhammaan qandaraasyadii dalka aan loo sinayn oo si gaar ahna loogu xidhay dad gaar ah, taas oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka, abuurtayna kala sarrayn dhaqaale iyo in Hantidii dalka gacanta loo galiyay dad gaar ah.
Shirweynaha beelaha Garxajis, wuxuu madaxweynaha u soo jeedinayaa, kuna adkaynaa in Dastuurka Qaranka la furo si Beelaha darafyada Somaliland ee cabashadoodu inta badan soo noqo-noqotay iyo Beelaha kaleba xuquuqdooda Dastuuriga ah ay u helaan awoodda hoggaaminta dalkana loogu sinnaado.
Waxa cad inay isku milmeen saddexdii waaxood ee qaab-dhismeedka qaranku lahaa, sida waaxda fulinta, Sharci dejinta iyo Garsoorka. Sidaa awgeed Beelweynta Garxajis, waxay ku baaqaysaa in dib loogu soo noqdo ku dhaqanka dastuurka dalka, saddexda Waaxoodna kala madax bannaanaadaan.
Beelweynta Garxajis waxay dhiigeeda iyo iyo dhuuxeedaba u shubtay jiritaanka madax-bannaanida dalka Somaliland, si loo helo dal la wada leeyahay, iyadoo tiro ka badan toban kun (10,000) oo geesiyaal ahi ku weyday, tiro kale oo intaa ka badanna kaga naafawday. Sidaa awgeed Beelweynta Garxajis, waxay digniin culus u diraysaa cid kasta oo madaxda Qaranka ka tirsan oo beeshan ku eedaysa qaran dumis.
Bulshada reer Somaliland ee nabadda jecel waxay markhaati ka yihiin in dagaalka labada sano ka saconayay deegaanka Ceel-Aweyn ilaa haddana socda ee u dhexeeya labada beelood ee Walaalaha ah aanay dhex ka ahayn Dawladda Somaliland ee maanta jirta iyo dawladdii ka horraysay midkoodna. Sidaa awgeeda Beelweynta Garxajis waxay baaq nabadeed u diraysaa labada beelood ee dirirtu ka dhaxayso ee walaalaha ah iyaga oo leh ‘CAQLIGIINU HA GARTO DHIBAATADA GURYIHIINA TAALA’ . Madaxweynahana waxaanu ku adkaynaynaa inuu ku dhiirrado soo af-jarista si degdega colaaddaa, isagoo adeegsanaya awoodda dawladnnimo, caddaalad iyo inuu wax ka qabto dembiilayaasha dagaalkaas hurinaya ee isugu jira gacan ku dhiigleyaal iyo siyaasiyiinta xukuumaddiisa ka tirsan, si ay u fududaato in la isugu yimaaddo wada hadal nabadeed xalna loo gaadho, loogana badbaado in dagaalkaasi deegaano kale ku fido.” Sidaas ayaa lagu yidhi war-murtiyeedka